Jidadkiisa oo dhammu waa inay Play MP4 Files on TV (Samsung TV Mid)
Waa maxay sababta aan daawan karin MP4 files ee TV'yada ii? Tan iyo markii aad halkan u joognaa, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad daawato qaar ka mid ah MPEG-4 iyo MP4 videos ka PC in TV-ga (Samsung TV waxaa ka mid ah). Haddii aadan isku dayi tan oo aanad garanayn sida loo sameeyo, qodobkan wadaagi doona 4 hababka ugu fiican si ay u daawadaan AVI / MP4 / DiVX on TV. Waxaad ka mid ah 4 doorashada dooran kartaa sida ay noocyada qalab aad iyo kharashka suurogal dheeraad ah oo aad ku soo iibsato qalabka dheeraad ah.
Qeybta 1: 4 Siyaabaha Play / Watch MP4 on TV (Samsung TV Mid)
Qeybta 2: Best Video converters u ciyaaro MP4 on TV (Samsung TV Mid)
Qaybta 1aad: Sida loo Play / Watch MP4 on TV (Samsung TV Mid)
Fadlan u hesho 3 hababka hoos ku qoran si aad u sii qulquli MP4 ka PC in TV. Ka dib markii aad PC iyo TV ayaa ku xiran, fadlan on your computer iyo isticmaali fog fog si ay u sameeyaan goobaha saxda ah. Markaas fadlan on your computer. Bandhigay ayaa ka your computer waa in si toos ah bandhigay on shaashad telefishan ah. Markaas waxaad daawan kartaa video on TV haatan.
# Habka 1: MP4 in TV via (AV) fiilooyinka maqal iyo muuqaal ah
Waxaa jira 4 noocyada kala duwan ee la xidhiidha cable; ka HDMI, DVI, VGA iyo S-Video. Sida caadiga ah waxaa jira wax soo saar on your computer iyo talooyinka aad TV. Waxaad si aad u hubiso dekedaha ay labada of your computer iyo TV ka hor lifaaqaya ama geftinka aad PC in TV-ga la fiilooyinka. Wixii macluumaad ah oo faahfaahsan, fadlan riix halkan .
# Habka 2: Play MP4 Wireless
Marka laga reebo lifaaqaya fiilooyinka, waxa kale oo aad isku dayi kartaa xidhiidhka ka wireless. Waxaad isku dayi kartaa Wi-Fi in ay ku xidhmaan aad PC in TV oo aan fiilooyinka. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan kartaa PC ah wireless sanduuqa diinta TV. Waxaa siisa xiriir Wi-Fi in computer kasta oo guriga. Sanduuqani waxa uu u gudbin doonaa waxyaabaha ka soo internetka si aad PC. Waxaad ka iibsan kartaa PC ah Wireless sanduuqa diinta TV online. Wixii macluumaad ah oo faahfaahsan, fadlan riix halkan .
# Habka 3: Display MP4 via USB ah ee TV
Waxaad ka heli kartaa dekedda USB ah xagga dambe ee aad TV. Just soo shirtagi USB ah u galay, ka dibna waxaad ka ciyaari kartaa MP4 USB on TV. Wixii macluumaad ah oo faahfaahsan, fadlan riix halkan .
# Habka 4: Stream MP4 in TV
Haddii aad qabto Chromecast ah, Apple TV, Roku, Madaxweyne Siilaanyo ama PS3, waxaad fursad u haysataa in kale oo kaliya qulquli files MP4 si aad u TV. Taasi waa mid aad u fudud. Qalabka geeyo kala duwan ayaa laga yaabaa in siyaabo kala duwan si ay u sii qulquli aad files deegaanka ka PC in TV. Tusaale ahaan, u Chromecast, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan browser Chrome iyo sidoo kale kordhin Chromecast si ay u sii qulquli MP4. Laakiin hab surefire waa in la isticmaalo Wondershare Video Converter Ultimate inuu kaa caawiyo inaad sii qulquli files MP4 ka mid ah, iyadoo aan loo eegayn waxa geeyo qalabka aad haysato. Marka hore aad u baahan tahay si aad u hubiso PC iyo qalab geeyo sida Chromecast ama TV Apple ay ku xidhan yihiin shabakad isku mid ah. Markaas rakibi Wondershare Video Converter Ultimate iyo sidoo kale in ay plugin --_ 1_698_1_ Media Server. Open Wondershare Server Media iyo dajiyaan files MP4 aad, markaas dooran qalab geeyo oo guji Play a on TV icon inay ku tuuraan videos in ay TV in habka ugu fudud. Halkan waa hage faahfaahsan . By habka, waxaad sii qulquli karaan qaab la mid ah sida MKV, RMVB la Wondershare Video Converter Ultimate oo xaqiiqo ah ma jirto baahi loo qabo diinta.
Haddii aad doorato saddexda xal ugu horeysay kor ku xusan, mararka qaarkood waxaad ka heli kartaa videos ma playable ama qurbo aad TV ka dib markii xidhiidhka. Taasi waxaa laga yaabaa sababta oo ah codecs gudaha files MP4 ee ma taageersana by TV. Waa halka Converter video ah ku yimaado. Wondershare Video Converter Ultimate Waxaa lagu talinayaa, taas oo keliya barnaamijka ku xusan hab 4 kor ku xusan. Waxaa si fudud u bedeli karaan videos in qaab TV taageerayaan aad. Sidoo kale waxaad si fudud u gubi kara MP4 in DVD, ka dibna waxaa la ciyaaro DVD ciyaaryahan aad on TV.
Beddelaan kasta iyo wixii soo baxayey videos ee ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta.
Presets filaayo in diinta MP4 qalabka kala duwan, sida telefishin, Game, Samsung, Apple, HTC, iwm
Si toos ah gubi MP4 in DVD si aad u daawato shaashad weyn oo tayo sare leh oo la arrimo badan oo DVD menu.
Shakhsiyeeyo video leh tafatirka classic, sida falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray Cinwaan, iwm
Samayso movie gaar ah ay ku daray ama edit metadata in videos sida comment, sharaxaad, jilayaasha, agaasimayaasha ama magaca dhacdo, iwm aad
Taageerada qaab kasta oo
Raadinta aalad in loogu badalo kartaa wixii video? Halkan Waxaad tahay. Iyada oo ah user interface saaxiibtinimo oo dareen leh, video Converter arrintaasna TV badalo karaa tiro balaadhan oo ah qaabab video in TV ee 30X dhakhso xawaaraha diinta ka badan wax diinta ka qalab caadi video.
Beddelaan MP4 in TV
Waxaad isticmaali kartaa presets dhisay-in loogu TV si loogu badalo MP4 si toos ah TV eegin dhimaya ee adag ee lagu daydo TV duwan.
Presets TV laga heli karaa: Samsung TV, LG TV, Sony TV, Panasonic TV.
Speed ​​Conversion Cajiib ah
Waxaad ku dhameysan kartaa diinta filim ama show TV ee size waaweyn ee kaliya dhowr daqiiqo ah, samaynta aad daawato filimka aad jeceshahay goobtii.
Play MP4 dul gubay TV
in DVD Waxaad gubi kara MP4 video ka dibna u ciyaaro TV la DVD ciyaaryahan aad. Xitaa aad u xoojin karto video by tafatirka, isagoo intaa ku daray metadata si ay adiga kuugu masterpiece ah.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Video Converter Ultimate >>
Haddii aad rabto in aad si fudud u samayn, waxaad u isticmaali kartaa online video Converter oo lacag la'aan ah . Isku day hadda.
Play MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 : Hadii aad dhibaato ku ciyaaro MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, waxaad heli doontaa in aad ogaato sababta oo halkan xal loo helo.
Beddelaan AVCHD in MP4 : Bixi Hanuuniye tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo gaaro AVCHD in ay diinta ka MP4 ee Mac ama Win.
Split MP4 Files : Split file a MP4 waaweyn galay dhowr clips si fudud ama saaro qeybaha la doortay ee file MP4 si aad u files cusub oo aan dib-u-Deji.
4K VS 1080P: Maxaad 4K waa ka fiican yahay 1080P
> Resource > Video > Sida loo Play MP4 Files on TV (Samsung TV Mid)